musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » A Big NO kuKenya Tourism neUNWTO: Africa Yakatsamwa!
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gurukota reKenya rezveKushanya uye Nyama dzemusango VaNajib Balala
Amai Africa vakatsamwa nhasi. Sezvinotarisirwa na eTurboNews, UNWTO Sercetary General vakaramba chikumbiro chakaitwa neGurukota reKenya chekuti musangano weGeneral Assembly uitwe muKenya.
Madrid senzvimbo inoratidzika kunge iri mukana wakajeka weZurab Pololikashvili kuti asimbiswe zvakare seMunyori Mukuru kune imwe nguva ye2 makore.
Moroko yaifanirwa kubata UNWTO General Assembly Mbudzi 28 - Zvita 3, 2021, asi yakamiswa nekuda kweCCIDID chengetedzo. Chikumbiro ichi chinogona kunge chavhiringika mushanduro
Zvakatora UNWTO mazuva matatu kuzivisa nyika dzenhengo, uye mukati memaawa mushure mekugamuchira chinyorwa ichi, Kenya yakazvipira kutora nzvimbo yeMorocco nekuita chiitiko. Kenya yaive nhamba yechipiri sarudzo muhurukuro yekutanga makore maviri apfuura.
Munyori Mukuru weUNWTO akaramba zvakanyanya kupihwa neKenya.
Makurukota akati wandei emuAfrica ataura kusafara kwawo nedanho ratorwa neUNWTO uye vamwe vakati Africa inofanirwa kugumbuka nedanho rekurambidza chikumbiro ichi chekuti nyika yemuAfrica itambire.
Akaodzwa mwoyo kana kuti akatsamwa Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism weKenya, akasimbisa, "UNWTO Munyori Mukuru Zurab Pololikashvili akaramba zvachose chikumbiro chedu chekuitisa General Assembly. " Mhinduro kubva kuUNWTO yaive yekuti yakange yanyanya kunonoka, hapana nguva yakakwana.
Rimwe gurukota remuAfrica rakati, UNWTO yave pakupera simba uye yave kurasa chivimbo chakazara muAfrica. Ino ndiyo nguva yakakwana yekubvunza General Assembly kuti ivhote pachivande kuti vanyatsoona kana kusarudzwazve kwaZurab nedare repamusoro kunofanirwa kusimbiswa.
Mumwe mumiriri asiri muAfrica akati kunze kwerekodhi: Hapana anoda kuti asarudzwe zvakare. Tinofanira kuita zvose zvatinogona kuti timubvise. Nguva inogona kunge yasvika zvino.
PaGeneral Assembly muChengdu, China, muna 2017, Zurab yakasimbiswa nechiziviso, kwete nevhoti yakavanzika. Zvinotora nyika imwe kukumbira vhoti yakavanzika.
Vazhinji vanofunga kuti Zurab haaizowana iyo inodiwa 2/3 ruzhinji kana paine vhoti yakavanzika paGeneral Assembly inotevera.
Nekudaro, kuve neGeneral Assembly inoitika muMadrid mukana mukuru kwaari. Zvinotarisirwa kuti makurukota haaende kuMadrid kumusangano mukuru weUNWTO uye achatsiviwa nevashandi vekuembassy.
Africa ndiyo ine nhamba yepamusoro-soro yenhengo dzeUNWTO, asi hadzisi nyika zhinji dzemuAfrica dzine vamiriri muMadrid kana mari yekutumira gurukota rezvekushanyirwa kwenyika kuSpain.
Zurab Pololikashvili anoziva nzira yake yakatenderedza nharaunda yevamiriri muMadrid. Akange ari mumiriri weRepublic of Georgia asati atora UNWTO.